Ukudla okungama-7 okudingeka uzame ku-Antigua
I-Caribbean I-Antigua ne-Barbuda
7 Ukudla okudingeka uzame ku-Antigua
Isiqhingi sase-Antigua saseCaribbean sakhiwa ngokudla. Ekuqaleni ihlelwe njengendawo yesitshalo soshukela kanye nama-distilleries e-rum, i-Antigua eminyakeni yamuva iye yaba indawo yokudlela ngenxa yezingcebo zasolwandle olwandle lwayo, ama-rums ekhwalithi ezibukweni zayo, nenjabulo kubantu bayo. Lezi yizinto zokudla eziyisikhombisa okufanele uzame uma uvakashela ogwini lolwandle lwe-pearlescent.
I-Conch curry ku-Dennis Cocktail Bar & Restaurant, i-Antigua. Elspeth Velten
Njengeziqhingi eziningi zaseCaribbean, i-Antigua idlula ezokudla zasolwandle kanye ne-conch ingenye yezilwane ezidumile kakhulu. I-conch (ebizwa ngokuthi i- conk ) yinyama etholakala ngaphakathi kwamagobolondo okuvunguza okugeza emabhishi aseS West Indies. Ukuhlaziya kancane nokukhumbuza ama-clams, i-conch ingahle ilungiswe ku-curries, fritters, ama-chowders, futhi kuluhlaza ku-ceviches.
Enye yezindawo ezinhle kakhulu zokuzama ukuxhuma ku-Buffet yaseLimpopo noLumber Hotel ngoLwesihlanu ebusuku. Ebizwa ngokuthi enye yezinhlanzi ezingcono kunazo zonke e-Caribbean, i-Friday Night Buffet Seafood iyatholakala endaweni enhle ye-UNESCO World Heritage Site yaseNelson's Dockyard. Izakhamuzi, izivakashi, kanye nezivakashi ziya kulolu daba lokudla okulwandle olwandle lapho i-crispy conch fritters kanye ne-conch izitsha zihlale kwimenyu. Uma i-conch ingeyona ijubane lakho, zama i-surf enkulu ne-turf efaka isiteji, isigamu se-lobster, nezinhlangothi.
I-Saltfish ne-fungus (ebizwa ngokuthi i-foon-ji) yisidlo sikazwelonke se-Antiguan. I-fungi inguqulo ye-Antiguan ye-polenta noma ama-grits, okwenziwe ngokwenza i-cornmeal ne-okra unamathisele kubhola. Okuyisisekelo ekudleni kwe-Antiguan, isikhunta sivame ukukhonzwa ngezitshalo nezinyama. I-saltfish, inhlanzi ephulukisiwe-ephulukisiwe usawoti, ingenye yezinhlangothi ezimbili ezithandwa yi-fungi.
Lezi zimbambo, izindlu zokudla zokudla kwama-antiguan futhi, uma ufuna ukuzama, yiya e-Suga Beez eSt. John's. Umnikazi u-Abena Straker ukhonza izitsha zendabuko yama-Antiguan ngemenyu emifushane, elula eguquleka nsuku zonke. Abahlali bayakujabulela ukudla abakhulile bakudla, njenge-pea-eyed irayisi, i-chop-up (isipinashi eqoshiwe kanye ne-stewed, i-okra, nesitshalo seqanda), amanzi okugcoba (umhluzi usawoti kanye nenyama ye-conch), no-saltfish obaluleke kakhulu nesifungi. Indawo yokudlela inikeza ngisho nezinketho zemifino kubantu baseRastafarian bendawo, okwenza kube yindawo enhle abahambi bemifino ukuba badle ukudla okunomsoco, okwenziwe endaweni.
I-rum yisisiphuzo sokuphuza utshwala e-Antigua, ngoba i-rum yezohwebo yakha lesi siqhingi. I-rum i-Antiguan inomnandi kakhulu kunamanye ama-rum kanye ne-Antigua Distillery Limited, i-distillery enkulu kunazo zonke esiqhingini, ikhiqiza ama-rum amabili aphezulu: i-Cavalier, efika ekukhanyeni nasebumnyama, nase-English Harbour, enikezela i-rum engu-5 no-10 . Lezi zingxenye eziphezulu zekhwalithi, zilungiswe kahle kakhulu, ngakho ngeke uzithole emigodini eminingi yama-rum. Uma ufuna ukuphuza ukuphuza i-rum, ikhanda ku-Antigua Distillery Limited ukuvakashela isikhungo sabo bese uzama ama-rums wabo ekamelweni lawo lokunambitha.
UDonald Nausbaum / robertharding / Getty Izithombe
Ngesikhathi i-rum yisiphuzo esiyisidakwa esiqhingini, i-rum punch yisiphuzo esiyintandokazi esiqhingini. Futhi, cishe wonke umuntu uzokutshela ukuthi uma ufuna ukuthola i-rum punch engcono kakhulu eCaribbean, yenza indlela yakho eya kuPapa Zouk, ngaphandle kweSt. John's. Ama-rum angaphezulu kwama-200 ahlanganisa ibha kanye namashalofu asezindongeni kulo lonke lokudlela futhi uqinisekisiwe ukuthola i-rum noma i-rum punch evumelana ne-tastebuds yakho. Okuthandayo nguPapa Zouk's Ti 'Punch, owenziwe nge rum eliphezulu, i-lime juice, noshukela lomhlanga.
I-Ducana i-Antiguan sweet potato iresiphi, eyenziwe ngokumboza amazambane anambithekile kanye nekakhukhunathi eqabhanini bese ibamba ukudubula. Ngokufanayo ekuthungeni ukuze kube lula, i-ducana imnandi kakhulu futhi iyiphunga, ihambisana ne-saltfish noma i-conch.
Ubhiya angeke kubonakale kuyisinqumo esicacile esiqhingini saseCaribbean esiyaziwa nge-rum, kodwa ubhiya be-Wadadli buhlukile ku-Antigua. I-Brewed esiqhingini futhi ibizwa ngokuthi igama elidala kubantu base-Antiguan, i-Wadadli iyinhlangano elula, enhle kakhulu, ephelele yokuphuza ngobusuku obuhle obuhle bama-Antiguan ngamanzi. I-Wadadli ayitholakali ngaphandle kwe-Caribbean, ngakho-ke kuzodingeka ujabulele okuningi lapho use-Antigua.
I-Sauce Hot Hot
I-hot sauce inkulu emaCaribbean, futhi ku-Antigua, i-Sauce Hot Sauce iyindlovukazi. Ukugijima nguRosemarie McMaster, indodakazi kaSusie McMaster, umsunguli wenkampani, uSuce's Hot Sauce usukhule waba umbuso kusukela ekusungulweni kwawo ngo-1960. "Ngesikhathi ngithatha uma umama eshona, wayenomsila owodwa futhi yilokuqala futhi ngathatha kuya kuma-saizi angu-11, "kusho uMcMaster, emele ekhishini lomuzi wakhe elizungezwe ngamabhodlela amaningi ashisayo e-flavour ahlukene, emidlalweni yemidlalo yamalebula okukhunjulwa.
UMcMaster wenza izinhlobo ezihlukahlukene zama-sauces ashisayo, kusukela ku-1 million wezigidi ze-Scoville unit "Scorpion" sauce kuya emnandi, "Izinkathazo ze-Ananas". Wamenza umsizi we-"Tear Drops" ukuze abakwa-local bartenders bangene esikhundleni seTabasco ngaphandle . "Izinyembezi zami zezinyembezi zingashaya noma yikuphi iTasco," uyancipha. Futhi-ke, usaqhubeka nomswakama wangempela unina, u-medium-spicy and vinegary, uphelele ukudla okunesidlo se-Antigua.
I-Sandals Grande Antigua Resort & Spa
I-Barbuda's Frigate Bird Sanctuary
Ukubheka Okuhle Kakhulu e-Antigua naseBarbuda
I-Antigua ne-Barbuda Amahhotela Aphelele Namahhotela Okungcebeleka
Izinto Ezinokuzenzekelayo Okuzokwenziwa E-Antigua naseBarbuda
Imephu yeSt. Maarten neSt. Martin e-Caribbean
Amalungelo Abagibeli Uma Ubalekela Kuye noma Uvela E-Ireland
Buyekeza: I-BigSkinny World Bi-Fold Wallet
U-Bonnie Screams In Las Vegas
I-Market Market ye-Fish
I-Maryland Renaissance Festival Izithombe
Amathuna angu-15 eQueens, eNew York
I-Annual Shrine Circus e-Albuquerque
Ukuza maduze kuya kuWalt Disney World
I-Pokemon Enhle Ihamba Emadwaleni Amancane
Indlela Yokulondoloza Imali Eholidini Lase-Italy
Amakhodi ezindiza eGrisi
Izindawo zokuhlala eziphezulu ze-Ski Family 20 eNyakatho Melika
Izindwangu Zomphakathi eMinneapolis naseSt. Paul